musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Philippines Kupwanya Nhau » Kudengenyeka kwenyika kune Simba Rocks Philippines
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • Philippines Kupwanya Nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mumazuva manomwe apfuura, Philippines yakazungunutswa nekudengenyeka kamwechete kwakakura 7, 1 kudengenyeka kwakakura 7.0, 1 kudengenyeka pakati pe5.1 na 5, makumi matatu nemashanu pakati pe4.0 uye 5.0, uye 35 kudengenyeka pakati pe3.0 ne4.0.
Kwete Tsunami Yambiro nyaya
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kwePhilippine kwakarova mangwanani-ngwanani neChina.
Kudengenyeka uku kunofanirwa kunge kwakanzwikwa zvakanyanya nemunhu wese ari munzvimbo yepakati.
Vakuru vePhilippine havasati vapa yambiro yetsunami yekudengenyeka kwanhasi
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba, Kwakakura 7.1 kwakarova muPhilippines gungwa, makiromita 74 (46 mamaira) kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweMati, Firipaini nhasi.
Kudengenyeka kwenyika kwakarova mangwanani-ngwanani neChina, Nyamavhuvhu 12, 2021 na1: 46 am (GMT +8) nguva yemuno pakadzika kwakadzika kwemakiromita gumi.
Kubva pane dhata rekutanga rekudengenyeka kwenyika, kudengenyeka kwacho kwaifanirwa kunge kwakanzwikwa zvakanyanya nevanhu vese vari munzvimbo yeepicenter. Zvinogona kunge zvakakonzera kukuvara kune mwero.
Kuzunza zvine mwero kungangoitika muBobon (pop. 4,500) iri 64 km kubva kunzvimbo, Tibanbang (pop. 7,800) 77 km kure, Mati (pop. 105,900) 79 km kure, Manay (pop. 20,300) 80 km kure, Sigaboy ( pop. 8,000) 81 km kure, uye San Isidro (pop. 9,700 85) XNUMX km kure.
MuLupon (pop. 27,200) iri 96 km kubva kunzvimbo, Davao City (pop. 1,212,500) 144 km kure, Magugpo Poblacion (pop. 233,300) 149 km kure, uye Panabo (pop. 84,700) 150 km kure, kudengenyeka kunofanira kunge akanzwika sechiedza kuzunza.
Iko hakuna iko pakarepo mishumo yechero kukuvara kana kukuvara panguva ino. Hapana yambiro yetsunami yakange yapihwa kubvira ikozvino.
Mumazuva manomwe apfuura, Firipaini yakazununguswa ne1 quake yehukuru 7.0, 1 quake yehukuru 5.1, 5 quakes pakati pe4.0 uye 5.0, 35 quakes pakati pe3.0 uye 4.0, uye 187 kudengenyeka pakati pe2.0 ne3.0.
Paivewo nekumwe kudengenyeka makumi mashanu nepfumbamwe pazasi pehukuru 56 izvo vanhu vasingawanzo kunzwa.